Roob lagu diirsaday oo Ka da’ay Magaalada Qardho (Sawiro) • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Puntland News / Roob lagu diirsaday oo Ka da’ay Magaalada Qardho (Sawiro)
Roobkan ayaa waxa uu ka mid yahay roobab is xigxigay oo todobaadyadi ugu dambeeyay ka da’ayay magaalada Qardho, waxaana si weyn ugu diirsaday dadka reer Qardhood oo iyagu mudoba dhex mushaaxayay biyo xareed ah oo EEBE weyne ku minaystay magaalada Qardho.
Dadka Soomaalida ah ayaa ugu yeera roobkan SAMUULAD wuxuuna da’a waxkhtiga lagu jiro dabayaaqada xili roobaadka Gu’ga, inkastoo aanu roobkani ahayn mid u xoogan sidii roobabki hore ee da’ay bilowgi Gu’ga , hadana waxa uu biyo dhigay jidadka magaalada Qardho isagoo xayiray qadar Saacado ah isu socodka dadweynaha iyo gaadiidka.
Roobki xalay ka da’ay ayaan ku sinayn gudaha magaalada oo kaliya, balse wuxuu ka da’ay deegaano hoos yimaada magaalada Qardho ee xarunta gobolka karkaar, dhulka uu ka da’ay roobkani ayaa la ii sheegay inuu u badanyahay miyiga ku teedsan magaalada.
Si kastaba ha ahaate roobab lixaad leh ayaa ka da’ay magaalada Qardho bilawgi dabayaaqadi bishi May, waxaana si weyn ugu doogay dhulka oo mudo la engegna roob la’aan, hadase dhulka dushiisa waxaa ka muuqda isbedel xaga muuqaalka ah oo waxaad arkaysa caws iyo xamash ka soo biqlay oogada sare ee dhulka.
C/rashiidÂ Maxamed Daahir + Ayuub Cabdiraxmaan Maxamed